ज्ञानेन्द्रले झन्डै गोली ठोकेर मारे | Sindhuli Darpan
SD News Team
ज्ञानेन्द्रले झन्डै गोली ठोकेर मारे Reply
देश विकासको पूरै योजना मसँग थियो, मैले फटाफट सुनाएँ । प्रभावित भएर राजाले भने, 'लेट्स वर्क टुगेदर, गिभ मि योर मोबाइल नम्बर ।' मोबाइल नम्बर साटासाट भयो, बडो गजबको कुरा भयो ।
अन्तिममा राजाले राजतन्त्रको भविष्य के छ भनेर सोधेका थिए, मैले त भविष्य छैन, सकुन्जेल मिलेर काम गरौँ भनिदिएँ । राजाले 'किन' भनेर सोधे, मैले वीरेन्द्रको वंश विनाश हुनुमा दोष कसको छ थाहा छैन, तर मान्छेहरूले सरकारलाईर् नै भन्छन्, भनिदिएँ । मेरी आमाले यी राजाको मुख देख्नुसाथ टिभी बन्द गर्नुहुन्छ । पारसको ताल त्यस्तो छ । अनि कसरी राजतन्त्र टिक्छ भनिदिनूँ ।
त्यो विवेक शाह थियो । उसले पनि थर्काउन खोज्दै थियो । मैले भनिदिएँ, 'अस्ति चौरमा बसेर सँगै दारु खाने, अहिले दरबारभित्र बसेर मलाई थर्काउने ?' ऊ कराउँदै थियो, म हिँडेँ ।
कमल थापा सञ्चारमन्त्री थिए, म एफएमको लाइसेन्स लिन गएको थिएँ । ओ केशवजी ! सहयोग गर्नुपर्‍यो भने उनले । मैले भनेँ, 'मलाई मेयर बनाउनुस्, राजालाई ढाँट्न काम लाग्छ । म ड्याङडुङ पारिहाल्छु । धुमधाम काम भएको छ भनेर राजा दंग परिहाल्छन्, अनि तपाईं गरिखानूस् ।' उनले त्यहीँबाट प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालाई फोन गरे, अर्को दिन थापाकहाँ जानबित्तिकै लौ काम गर्ने मान्छेसँग अँगालो मार्नुपर्‍यो भनेर अँगालो मारे । अनि मलाई मेयर बनाए, काम सुरु गरेँ । राजालाई भेट्नै परेन ।
कुरा के हो भने दोस्रोपटक वार्ता टोली आयो, सबैतिर डेरा खोजेछन्, कहीँ भेटेनछन् । पहिले एमालेमा भएका एकजना मित्रले तपाईंकै घरमा नेताहरूलाई बसाउनुपर्‍यो भने, मैले हुन्छ भनेँ । १०/१५ जना गार्डसहित बादल आए । बेलुका सँगै थियौँ, मैले भनेँ, 'मेरो त दारु खाने वेला भयो, तपाईंहरू खानुहुन्छ ?' उनीहरूले खान त खाइन्छ तर आज कतै बोलाउन सक्छन्, नखाउ“m भने । मैले खाएर गफ दिन थालेँ ।
मैले भनेँ- कि तपाईंहरू टुंगिनुपर्‍यो, कि जित्नुपर्‍यो । जित्ने हो भने झापा विद्रोहजस्तो गरेर आज गर्ने, वर्ष दिनपछि थाहा पाउने हुनुहुन्न, जनताले तत्काल थाहा पाउनुपर्छ । तपाईंहरूलाई एफएम चाहिन्छ, टिभी चाहिन्छ, पत्रिका चाहिन्छ, जमानाअनुसारको युद्ध गर्नुस्, जित्नुहुन्छ । नत्र वैदेशिक रोजगार भन्दै सबै युवा विदेश जान्छन्, तपाईंको युद्ध सकिन्छ भनिदिएँ । तपाईंले केके सहयोग गर्नुहुन्छ त भनेर सोधे । मैले रेडियो चाहिए रेडियो, टिभी चाहिए टिभी, कपडा चाहिए कपडा, हतियार चाहिए हतियार सबै ल्याइदिन्छु, भनिदिएँ । त्यसको केही समयपछि उनीहरूले दाङ हाने, भूमिगत भइहाले ।
आर्मीको खास मान्छेले मलाई दसैँको टीकाको दिन डाकेर भने, 'ल आज मेरो हातको टीका भाइले लाउने, भाइको हातको मैले लगाउने ।' टीका लगाइयो, दारु खान बसियो । खाँदै गएपछि त अचानक भन्छ, 'माओवादीलाई एफएम किनिदिने ? हतियार मिलाइदिने ?' दारु त भाग्यो । तैपनि भनिदिएँ, 'माओवादीले दीर्घकालीन जनयुद्ध भन्छन्, दीर्घकालसम्म यो लफडा कसले सहने ? फैसला छिटो हुनुपर्‍यो भन्ने मेरो मान्यता हो ।'
सोल्टी होटलमा कार्यक्रम थियो, कार्यक्रममा मोबाइल अफ थियो । पछि दारु पनि खाइयो । हिँड्ने वेलामा मोबाइल अन गरेको त साधुरामले फोन गरेर भन्छ, 'ए साला, कुकुरको मुत खाएर बसेको ?' अनि मैले भनेँ, 'तँचाहिँ जनताको रगत खाएर बस्ने ?' झन् कस्सिएर 'बाहिर निस्की तलाईं ठोक्छु' भन्छ । मैले भनेँ, 'हेर भाइ, तँ पनि कम्युनिस्ट, म पनि कम्युनिस्ट, हतियारले हान्न पाइँदैन, फाइट खेल्ने भए खेलौँ ।' अनि पुलिस-सुलिसलाई फोन गर्ने हैन है भन्छ । मैले भनेँ, 'फोन नकाटी जाउ“m, पुलिसलाई फोन गर्ने चान्स नै भएन ।' महाराजगन्ज भेट्ने कुरा भयो, फोनमा गाली गरागर । मेरो ड्राइभर कापिरहेको थियो, वडाध्यक्षले त झन्डै पाइन्टमै पिसाब फेरेछ । महाराजगन्ज पुगेपछि चाबहिल जाउ“m भन्छ । मैले भनेँ, 'ठोक्नचाहिँ पाइँदैन, जहाँ भने पनि जान्छु ।' मेरो गाडीका अगाडि-पछाडि उनीहरूका मोटरसाइकल । गालीबेइज्जती त कति कति Û त्योबीचमा त्यसकोे अर्को मोबाइलमा फोन आयो, उता कुरा गरेर मलाई भन्छ, 'तँलाई आज नठोक्नु भन्ने खबर आएकोले बचिस् ।' म त झसंग भएँ । भनेँ, 'ए बेइमान, तँैले मार्न पो खोज्याथिस्, फाइट मात्र खेल्ने भनेको होइन ?' झुक्याएर झन्डै मारेछ ।
जनकपुर महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बनाएर लग्ने-लग्ने भने, अन्तिममा रेडियोबाट समाचार फुकाए- केशव स्थापित छानिएन भनेर । आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित महानगरपालिकाको मेयर, अनि त्योचाहिँ पार्टीको महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको रूपमा पनि नजाने ? झोंक चल्यो, तेरा पार्टी तैँ गरिखा भनेर छाडिदिएँ ।
सुकुम्बासीको इस्यु लिएर हिसिलालाई भेट्न गा'थेँ । सुकुम्बासीका घरटहरा उठाउँछौँ भनेर थर्काउने, यो शैली त अमानवीय भयो भनेर मैले भनेँ । मैले बाटो विस्तारदेखि सुकुम्बासीका समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर यही डायरीमा टिपेको थिएँ, हिसिलालाई देखाएँ, हिसिला त डायरी बोकेर कुद्दै गइन् । एकैछिनमा बाबुरामलाई लिएर आइन् । केशवले त चमत्कार गरेको छ भनेर बाबुरामलाई भनिन् । के चमत्कार भनेर उनले सोधे । मैले डायरी पल्टाएर योजना देखाएँ । उनीहरूले मलाई बेलुका आउनु अनि कुरा गरौँला भने ।
बेलुका जाँदा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेललगायत सबै मान्छे थिए । त्यतिवेला लाजिम्पाटमा सडक भत्काउने तयारी थियो, मैले रोक्नुस् भनेँ । बाबुराम पनि झ्वाँकी मान्छे, तपाईंले भन्दैमा रोक्छु, तपाईंले भत्काउन हुने, मैले भत्काउन नहुने भनेर सोधे । मैले भत्काउन त भत्काउने हो तर चाँजोपाँजो सबै मिलाउनुपर्छ भनेर कन्भिन्स गरेँ । उनले तत्कालै रोके ।
करिब एक महिनापछि हावाबाट बिजुली निकाल्ने 'विन्ड मिल'को कुरा लगेर गा'थेँ फेरि बेलुका आउनुस् भने । म बेलुका गएँ । जानासाथ बाबुरामले भने, 'कांग्रेसले यो देश बनाउँदैन, एमालेले बनाउँदैन, राप्रपाले बनाउँदैन, मलाई तपाईंजस्तै मान्छे चाहियो, तपाईंको फोटोकपी एकजना दिनुस् ।' दुई/तीनपटक फोटोकपी फोटोकपी भन्छन् । मैले भनेँ, 'तपाईंले मुख फोरेर भन्न नसकेको, फोटोकपी होइन मै चाहिएको हो तपाईंलाई ?' बाबुराम दंग परेर मलाई सोधे, 'तपाईं मान्नुहुन्छ ?' मैले तत्कालै हात मिलाएँ ।
प्रधानमन्त्रीले तत्काल मन्त्रीकहाँ जानुस् भने । हृदयश त्रिपाठीले 'मान्छे त मलाई तपाईंजस्तै चाहिने हो तर अर्कै मान्छेको नाम सिफारिस भइसक्यो' भन्छन् । सचिवकहाँ गएको 'तपाईं आईए पासले कहाँ हुन्छ' भन्छन् । म फेरि घुमेर प्रधानमन्त्रीकहाँ गएँ । यस्तो-यस्तो भयो भनेर मैले सबै रिपोर्टिङ गरेँ । एक दिन बिहानै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो, कताकता लब्धप्रतिष्ठित पनि राख्ने व्यवस्था रहेछ, त्यही व्यवस्थामा टेकेर लब्धप्रतिष्ठितका रूपमा मलाई नियुक्ति दिइयो ।
तर, तपाईंजस्तो ँलब्धप्रतिष्ठित’ विकास आयुक्त भएपछि थापाथलीको सुकुम्बासी वस्तीमा डोजर लगाइयो नि ?
अनि, माधव नेपाल कस्तो मान्छे हुनुहुुन्छ ?
भयानक सम्झना छ, मलाई । एकदिन बोलाउनुभो, अगाडि राखेर ह्याँ गरेर यता फर्किनुहुन्छ, ह्वाँ गरेर उता र्फकनुहुन्छ, कुनै ताल हो यो भन्नुहुन्छ, अनि यसरी बन्छ देश भन्नुहुन्छ । घरि टाउको यता बटार्नुहुन्छ, घरी उता बटार्नुहुन्छ । मैले कुरै बुझिनँ । धेरैबेरसम्म ह्याँ र ह्वाँ गरेर थर्काउनुभो । कुरा खोल्नुभएन । म उहाँको सामुन्ने कहिल्यै चुरोट नखाने मान्छे, चुरोट सल्काएर तानिदिएँ । त्यसपछि उहाँ झन् उपि|mनुभो । फेरि भन्नुहुन्छ, 'यसरी देश बन्छ ?' अनि मलाई हाँसो लाग्यो । 'ए नेतृत्वको अगाडि हाँस्ने ?' भनेर फेरि थर्काउनुहुन्छ । 'के थर्काउनुहुन्छ, भन्नुस् न कुरा ?' मैले भनेपछि उहाँले एउटा बिल निकाल्दै भन्न थाल्नुभयो, 'नेकपा एमालेको कार्यकर्ता भएर १७ हजारको रक्सी खाने, यही हो इज्जत ? यसरी बन्छ पार्टी, यसरी बन्छ देश ?'
अहिले साउदी अरबमा राजदूत हुनुहुन्छ नि, उदयराज पाण्डे । उहाँको नयाँ बजारमा घर, बाउसँग खट्पट् । अहिले त मिल्छ, त्यतिवेला राजनीति नमिल्ने । घरको भाडा बाउले महिना मर्नु चार/पाँच दिनअघि नै उठाएर लग्ने, छोरालाई कहिल्यै नदिने । अति भएपछि उदयजीले डेरामा बस्ने सबैलाई एक दिन भन्नुभएछ, 'आज मलाई भाडा नदिने हो भने राम्रो हुन्नँ ।' उहाँले अचानक १७ हजार पाँच सय उठाउनुभएछ । 'भोलि बाउ पैसा माग्न आउँछन्, आज यो पैसा कसरी मास्ने ?' भन्दै उहाँ आउनुभयो । मैले भनेँ, 'एकै रातमा त्यत्रो पैसा सक्न त दारु खानुपर्छ, त्यो पनि ब्लू लेबल ।' साढे आठ हजारमा ब्लू लेबल किनेर हामी आँगन रेस्टुरेन्टमा गयौँ । मजाले विभिन्न स्न्याक्ससहित खायौँ । बाउलाई देखाइदिने भनेर रक्सीको बिल पनि रेस्टुरेन्टकै बिलमा लेख्न लगायौँ । साढे १७ हजार बिल भयो, पाँच सय रुपैयाँ टिप्स दिएर हिँड्यौँ । खाने टोलीमा एकजना माधव नेपालको खुफिया रहेछ, बिल लगेर दिएछ । माधवजीले कालो डायरीमा बिल राख्नुभएको रहेछ, पाँच वर्षपछि निकालेर मलाई थर्काउनुभयो ।
मैले घटना सबै बताएँ । मैले भनेँ, 'कमरेड तपाईंको अगाडि झुट बोल्दिनँ । सानोमा हामीले चिया खाएनौँ, यही खाएर हुर्केको हो, अहिले पनि कहिलेकाहीँ खाइन्छ ।' उहाँले कति खानुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो । मैले पञ्जा देखाएर 'पाँच पेग' भनेँ । तत्कालै उहाँले भन्नुभो, 'घटाउनुस्, आजदेखि तीन पेग खानूस् ।' मैले भनेँ, 'कमरेडले निर्देशन दिनुभयो, म आजदेखि तीन पेगभन्दा बढी खान्नँ ।' उहाँले त्यहीबाट भीम रावललाई फोन लगाएर थर्काउन थाल्नुभयो, 'ए भीमजी, यस्तो इमानदार कार्यकर्ताको विषयमा पोल लगाउने, तीन पेग खाउभन्दा तीन पेग मात्रै खाने यस्तो आज्ञाकारी कार्यकर्ता को हुन्छ ? यस्ता कुरा नलगाउनुहोला ।' मलाई पनि हिँड्ने वेलामा भन्नुभो, 'लिमिटभन्दा माथि नजानू है ।' मैले 'हवस् कमरेड' भनेर अभिवादन गरेँ ।
त्यो वेला एमाले फुट्यो, म मालेमा लागेँ । उपमेयर मैनालीजी, एमालेमा । पार्टीको कुरा मिलेन, हाम्रो कुरा कसरी मिलोस् । मैले जे गरे पनि उहाँले विरोध गर्ने, अवरोध गर्ने । तैपनि मैले पेलेरै काम गर्दै गएँ । तर त्यही वेला १० दिन जतिको लागि युएनको कार्यक्रममा भाग लिन म बाहिर जानुपर्ने भयो । मेयर बाहिर जाँदै छ, हाम्रो पालो बल्ल आउँदै छ भनेर विदुरजीले गोप्य मिटिङ गर्नुभएछ । मैले वर्षौं लगाएर गरेका निर्णय १० दिनमा उथलपुथल गर्ने तयारी भएको थाहा पाएपछि मलाई रातभरि निद्रा लागेन । राति महानगरपालिकाको नियमावली पल्टाएर हेरेँ, त्यहाँ त मेयरले उपमेयरसहित जनप्रतिनिधिलाई पनि काजमा पठाउन सक्नेछ भन्ने लेखिएको रहेछ । त्यसपछि राति नै ठूलो म्युजिक लगाएर कोठामा एक्लै हंगामा गरेँ ।
म विदेश जाने हो, तपाईंको काम यही देशमा छ भनेर भनिदिएँ । उनी त जिम्मेवारी आउने भनेर मख्ख । अघिल्लो दिन मैले कोटको खल्तीबाट खाम निकालेर भनेँ, 'पत्र तयार छ, भोलि दिन्छु ।' उनी खुसी भए । कार्यवाहक दिन पत्र तयार भएछ भन्ने लाग्यो, उनलाई । उड्ने दिन विमानस्थलमा बिदाइ गर्न पनि आए, फूलमाला लगाएर मेरो अबिरजात्रा गरे, उपहार पनि दिए । म गेटभित्र छिरेर बाहिर उभिएका उनलाई पत्र दिएँ, उनी मख्ख परे । मभित्र छिरिसकेपछि खोल्दा त उनी बेहोसजस्तै भएछन् । सीधै एभरेस्ट होटल गएर दिउँसै दारु खाएछन् । दुःखको कुरा खल्तीमा पैसा रहेनछ, महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतले उद्धार गरेर घर लगेछन् । कार्यवाहक त मैले आफ्नो पक्षका वडा अध्यक्ष श्याम चित्रकारलाई दिइसकेको थिएँ ।
कालभैरव नाच्न त भैरवजस्तो शरीर चाहिन्छ नि । अब जिउ कंकाल भइसक्यो, नृत्य गर्‍यो भने कंकाल नृत्य हुन्छ । विकास प्राधिकरणमा आएपछि ज्यान खत्तम भयो । ७२ किलो पुगिसकेको थिएँ, ८४ किलो पुगेर कालभैरवजस्तो बन्ने योजना थियो, यता आएपछि यस्तो छ । त्यतिवेला त १८/२० वटा अन्डा खान्थेँ । एक/एक वटा खान झ्याउ लागेर एकैपटक घोलेर पिउँथेँ ।
अनिल कपुरको नायकजस्तै ?
ठ्याक्कै त्यस्तो होइन, पेज थ्री र नायकको बीचको फिल्म बनाउने योजना छ । अहिले 'झ्याम्मै' भन्ने कार्यक्रम टेलिभिजनबाट चलाउन मन लागेको छ, त्यसमा नेता, तस्कर, घुस्याहा कर्मचारी सबैलाई झ्याम्मै एक्स्पोज गर्ने योजना छ । अहिले पनि 'यसो गरे कसो होला' भन्ने कार्यक्रम त आइरहेकै छ ।
तपाइर्ं आफैँ नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, यसो गरे कसो होला भनेर कसलाई सोध्नुहुन्छ ?
होइन, मेरो दिमागमा भएको कुरा व्यक्ति-व्यक्तिलाई भेटेर भन्यो भने त वर्षौं लाग्छ, टेलिभिजनबाट एकैपटक भन्यो भने त धेरैले थाहा पाउँछन् । त्यसैले जनमत बनाउन मिडिया चाहिन्छ । मेरो कार्यक्रम त राष्ट्रपतिले हेर्छन्, प्रधानमन्त्रीले हेर्छन्, कर्मचारीले हेर्छन्, सर्वसाधारणले हेर्छन् । सबैलाई एकैपटक सन्देश जान्छ । साभार : उमेश चौहान/नयाँ पत्रिका Like to share?
प्रतिक्रीयाका लागि धन्यवाद !
यो साता चर्चित
पत्रकार महासंघ सिन्धुलीमा काफ्ले सर्वसम्मत
ध्रुवचन्द्र खड्का, सिन्धुली फागुन २३ । अन्ततः पत्रकार महासंघ सिन्धुलीको अधिवेशन सहमतिमा टुंगिएको छ । द्धारिका काफ्लेको अध्यक्षतामा १२ स...
निलगाई मारिखाने पक्राउ
मिनकुमार दाहाल, सिन्धुली, फागुन २४ । संरक्षित निल गाई मारेर खाएको आरोपमा प्रहरीले हत्पते गाँउ विकास समितीका चारजनालाई पक्राउ गरेको छ ।...
दुम्जाको छुर्पी सिन्धुली, फागुन १७ । सिन्धुली दुम्जा स्थित काफ्लेचौरका कृषक राम कुमार सिंजालीले आफ्नै घरमा उत्पादन गर्नुभएको छुर्पी । १८ वर्षदेखी यो व्...
विवेकपुर्ण तरिकाले चुरेवाट ढुङ्गा वालुवा झिकिने
मिनकुमार दाहाल, सिन्धुली, फागुन २६ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सिन्धुलीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा वन तथा भु–संरक्षण मन्त्री म...
लोडसेडिङ्ग भएपछि दुर्घटना कम
मिनकुमार दाहाल, सिन्धुली, फागुन २७ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका सिन्धुलीका डाक्टर राहुल झाले जिल्लामा लोडसेडिङ्ग भए पछि सडक दुर्घटना ...
Copyright © 2008-2013 Sindhuli Darpan